Waxaa La ii Dhiibay Koox uu bur-buriyay David-Moyes - Cakaara News
Waxaa La ii Dhiibay Koox uu bur-buriyay David-Moyes
Macalinka Cusub ee Man-United Vaangaal Tababaraha cusub ee kooxda Manchester United Van Gaal ayaa ku muusanaabay in loo dhiibay koox uu bur buriyay Tabaraihii xagaagii hore ee David Moyes isagoona ka cabanaya dhawr ka mida laacibiinta kooxda oo hal boos ka wada ciyaara.
Van Gaal ayaa sheegay in ay wanaagsanaan lahayd in loo dhiibo shaqada kooxda United markii uu iskacasilay Ferguson intii loo dhiibi lahaa koox uu bur buriyay David Moyes waa sida uu hadalka u dhigaye. Van Gaal oo ka hadlay shirkiisii jaraa,id ee ka hor kulanka inter Milan ayaa yidhi: “Kooxdu waxay ku jirtaa fowdo ama qalalaase,
marka hore waa inaan saxnaa oo aan hagaajinaa kooxda kadibna aan dhawrnaa ciyaartoyda aan u baahanahay xili ciyaareed ka cusub”. “Marka aad fiiriso kooxda waxaad arkaysaa Rooney, Van Persie, Hernandez, Wellbeck, sidoo kale waxaad arkaysaa Juan Mata, Fellaini iyo Herrera, waxaa jira koox ciyaartoy ah oo hal boos kawada ciyaaraya”. “Ilaa hada ma garan karo Line up-kii aan ku ciyaarsiin lahaa kooxda, 3-5-2 ama 4-3-3, hadii aan ku ciyaarayo 4-3-3 waxaan u baahanay laacibiin badan oo ku takhasusay garbaha iyo weerarka kadibna waa inaan soo iibsanaa laacibiin kale ayuu yidhi”